CNAPS: Maro ireo tombotsoa azon’ireo mpisitraka | Madatopinfo
CNAPS: Maro ireo tombotsoa azon’ireo mpisitraka
Notontosaina omaly alatsinainy 8 Jolay teny amin’ny Carlton Anosy ny tapany voalohany ny famelabelaran-kevitra arahina ady hevitra mikasika ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara niarahan’ny Ministeran’ny Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy sy ny CNAPS, AMIT ary ny OSTIE. Nandray anjara mavitrika tamin’io famelabelaran-kevitra io ireo solontenan’ny orinasa sy mpampiasa, ny mpiasa. Raha ho an’ny CNAPS, nanana fotoana nifampizarana sy nifanakalozana tamin’ireo mpisehatra izy ireo nampahafantarana bebe kokoa mikasika ny tombotsoa azo avy amin’ny CNAPS ary teo ihany koa ny fepetra rehetra hisitrahana izany, ary tsy voatery ho tombotsoa mivantana izany fa misy amin’ny alalan’ny tolotra isan-karazany.
“Zava-dehibe ho anay mpiasa amina orinasa tsy miankina izao hetsika izao ialana amin’ny ahiahy misy eo amin’ny mpisitraka CNAPS. Afa-po tanteraka aloha raha izaho manokana ary ampiririsihana ny fisian’ity matetika. “, hoy ny mpisehatra iray sendranay.
Ankoatra ny ady hevitra, nisy ihany koa fanentanana ny orinasa hampiditra ny mpiasa amin’ny CNAPS noho ireo tombotsoa maro azo toy ara-pahasalamana na ihany koa eo amin’ny lafiny fianaran’ny ankizy. Hanomezana fahafàham-po ho an’ny mpanjifa, misy ny sehatra azo ifandraisana amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny CNAPS: www.cnaps.mg sy ny pejy Facebook CNPAS Madagascar. Anio talata 9 Jolay no hotanterahana ny tapany faharoa amin’ny fikaonan-doha iresahana ny tontolon’ny fiahiana ara-tsosialy io.
NY RAKETA NA “CACTUS”: Hotrandrahana eto Madagasikara amin’izay
NAINA ANDRIANTSITOHAINA, élu officieusement nouveau maire de la Capitale de Madagascar
AKANY AVOKO AMBOHIDRATRIMO: Niavaka ny fankalazana ny Jobily faha-55 taona
HENRY RATSIMBAZAFY: Hifamotoana amin’ny mpankafy azy eny amin’ny CCI Ivato
VOAHARY SALAMA: Mihamahazo lanja ny fiarahamonim-pirenena
TARIKA ZIV: Hiaka-tsehatra eny amin’ny AFT amin’ny alahady ho avy izao